China Type D Horizontal Multi-level Centrifugal Pump Pump mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Izy io dia fizaram-baravarankely iraisan-dàlana iraisan-dàlana, indrindra manohana ny tongotra, ary mampifandray ny mitsoka, ny afovoany ary ny fandefasana amin'ny alàlan'ny fanamafisana. Ny faritra mando toy ny impeller, guide vane, mampiasa ny CFD flow analysis amin'ny sehatry ny fizahana mari-pahaizana ho an'ny famolavolana, izay mahomby.
Izy io dia fizaram-baravarankely iraisan-dàlana iraisan-dàlana, indrindra manohana ny tongotra, ary mampifandray ny mitsoka, ny afovoany ary ny fandefasana amin'ny alàlan'ny fanamafisana. Ireto no tombony azony:
1. Ny faritra mando toy ny mpanosika, mitarika vane, mampiasa valin-tsivana mikasa CFD mba hahomby amin'ny famolavolana, izay mahomby;
2. Ny tombo-kase static eo anelanelan'ny fizahana ny fantsona, ny fizarana afovoany sy ny fantsom-panafihana dia ny tombo-kase vita amin'ny metaly sy ny famehezana dindona O-peratra, ary ny tombo-kase vita amin'ny baomba dia voatomboka amin'ny fonosana ramie na fanidiana mekanika, izay azo antoka sy azo antoka;
3. Ny fahitana mivelatra mahery, ny teknolojia pump be dia be no mitarika any Sina;
4. Ny mpitoto lalana mampiasa fifandanjana mavesatra sy fomba fandanjana mavitrika amin'ny famerana ny rotor mihazakazaka, ary ny fika dia mihazakazaka tsy misy fipoahana.
5. Ny vy amin'ny vy karbonina steel vy vy sy vy vy dia handalovan'ny fikarakarana hafanana multichannel, izay mahatonga azy ho hentitra sy maharitra;
6. Miaraka amin'ny firafitra mihetsika momba ny soroka manokana, azo itokisana kokoa amin'ny toeran'ny mpanondrana ary azo antoka kokoa amin'ny fandidiana;
7. Ampidirina na fanadinana avo lenta dia ampiasaina ao amin'ny fizarana suction sy fandefasana fako mba hiantohana ny fahombiazan'ny hydraulic sy ny fahatokiana ny fandidiana;
8. Ny mombamomba ny fifandanjana dia vita amin'ny vy vy avo lenta. Ny velarin'ny mpivady misy kiraro dia esorina na hamafaina amin'ny karbônina simenitra. Izy io dia manana hery fanoherana tsara sy ny asa fanompoana lava;
9. Ny modely sasany dia manangana rafi-doko roa voalohany amin'ny vanim-potoana mba hanatsarana ny fanatontosana ny anti-cavitation.
Ny vokatra andian-doka D / MD dia mety hahatratra GB / T 5657-20132 Famaritana ara-teknika ho an'ny fenitra voatavo centrifugal (Ⅲ); Ny vokatra MD andiany dia mifanena amin'ny fenitra MT / T 114-2005 "fantsom-bidy marobe ho an'ny harena ankibon'ny tany", ny modely MD rehetra rehetra dia nahazo ny mari-pankasitrahana momba ny fiarovana ny vokatra azo avy amin'ny National Center Products Safety Mark Center for Safety Standard, nahita ny tranonkala. : www.aqbz.org;
Ny vokatra andiany DF dia mahafeno ny fenitra GB / T5656-2008 ho an'ny fenitra «centrifugal pump» (II);
Ny fomba famolavolana, famokarana ary serivisy serivisy amin'ity vokatra ity dia manana rafitra fanaraha-maso hentitra, izay manome antoka tanteraka ny kalitaon'ny vokatra.
Previous: PQSN Series Double-Suction Pumps
Manaraka: Dobo Type Boiler Feed Pump